Minamato Yerunyararo Uye Nyaradzo | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Minamato Yerunyararo Uye Nyaradzo
Minamato Yerunyararo Uye Nyaradzo
Moyo wako unonetseka here? Iwe unonzwa here kuti mamiriro akakukomberedza akashatirwa zvekuti iri kukufukidza zvishoma nezvishoma? Ndine chidimbu chemashoko akanaka kwauri, Mwari akavimbisa kupa runyararo kunetseka kwedu kwepfungwa. Mazuva ano minamato yerunyararo uye yekunyaradza inosimbisa rugare rwaMwari mumoyo mako muzita raJesu Kristu. Chinyorwa chakataurwa mubhuku raJohani 16: 33 Ndakuudza zvinhu izvi, kuti mandiri muve nerunyararo. Munyika ino, muchava nedambudziko. Asi shinga! Ini ndakakunda nyika. Kana mweya wedu uchitambudzwa zvakanyanya, panodiwa zvikuru kuti rugare rwaMwari ruuye muhupenyu hwedu. Ipo, kuve muna Kristu Jesu hazvingoshandurire runyararo. Rangarira nyaya yevaApostora vaive muchikepe naJesu uye zvakadaro vari kunetswa nedutu rine hasha. Kristu aive akagara pakona yeigwa akarara zvakadzama asi achiziva zvinhu zvakakomberedza, uye zvakadaro chikepe chakange chave kuda kuchinjirwa kwakadzika nekuda kwedutu guru.
VaApostora vakaedza nepese pavanogona napo kununura mamiriro ezvinhu asi zvese hazvina zvazvakabatsira, patariro yose payakapera, vakarangarira kuti muponesi aive muchikepe navo, kudzamara vamutsa Kristu kuhope kwake uye akataura nedutu iro raive vaive nerunyararo. Zvakafanana nehupenyu hwedu pachedu, vazhinji vedu tiri muna Kristu asi zvakadaro tinorwira isu toga, tinotakurwa nehukuru hwematambudziko edu zvekuti tinokanganwa kuti kune murume anonzi Kristu anogona kutaura rugare muhupenyu hwedu. Kwete kusvikira takoka Kristu, zvese zvaachaita kugara uye kutiona isu tichirwira toga. Tinofanirwa kusvika pakuziva kuti Kristu akavimbisa kupa runyararo kune vedu vanotambudzika pfungwa, mazwi ake anoti; rugare rwangu ndakupa iwe, kwete senyika sezvaunokupa. Vangani vedu vanga vachirwa vega? Nei tichifanira kurwa tega kana isu tichigona kuvanda kuseri kwemuchinjiro kudzamara tava nerunyararo. Kunze kwekudzoka kwerunyararo, isu tichafaranuka. Nyaradzo shanda pamwe nerunyararo, pese panenge pasisina rugare, nyaradzo ichave iri kure nekubva ipapo.
Tinofanira kuvimba naMwari zvakakwana kuti tirege kusiya kwemamiriro edu ezvinhu akaomarara mumaoko ake uye anovimbisa kutipa nyaradzo kwatiri uye nekudzoreredza rugare kune pfungwa dzinotambudzika.
Tsvaga pazasi runyorwa rweminamato yemunamato ye runyararo uye nyaradzo yekuisa kunyarara Zvakaoma mamiriro edu ezvinhu.
• Ishe Jesu, nemoyo unorwadza, ndauya kwamuri, mweya wangu uri kunetsekana nedambudziko rakandikomberedza. Ndiri kurwadziwa uye ndinorwadziwa, ndinorarama seni ndiri ndega pasi pano ndisina rubatsiro. Ishe Jesu, ndinonamata kuti mupe runyararo mumweya wangu muzita raJesu.
• Ishe Mwari, ndinokumbira kuti mutidzidzise nzira yekutenda kunyangwe mukunyarara kwangu. Mifungo miriyoni inopfuura nepfungwa dzangu zuva rega rega nemamiriro azvino andakamira maari, ndiri kukurumidza kurasikirwa neni, Mwari, ndokumbirawo mundibatsire kuti ndisarasikirwe nekutenda kwangu muzita raJesu.
• Ishe Mwari, Bhaibheri rinoti Ishe vanopa simba kuvanhu vake; Jehovha anokomborera vanhu vake nerugare. Ndinotaura rugare rwangu rwepfungwa kuti uve muzita raJesu. Runyararo rwaIshe runopedza matambudziko nekutambudzika, ndinozvikoka muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Baba vari kudenga, ndinotaura rugare mune zvese zvakaoma zvehupenyu hwangu, ndinokumbira kuti nerunyararo rwaMwari Wemasimbaose runoisa kudzikama muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Baba vengoni, ndinokumbira kuti muve nekumuka mupe runyararo rwepfungwa kumweya wangu, Ipa kuvhenekerwa murima rehupenyu hwangu, ndinokumbira mwenje wako unovhenekera uyo unozotungamira tsoka kune chikamu cherunyararo, Ishe vhenekera icho mwenje muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Tenzi Jesu, kufa nekumuka kwako kwakaunza rugare uye nyaradzo kuhupenyu hwedu hwekutambudzika. Ndinosunga musungano yekufa kwako nokumuka uye ndotaura rugare murunyararo.
• Ishe Jesu, ndinokukoka kuti uuye kuzotonga hupenyu hwangu, ndinokukoka kuti uuye kuzotora kutonga kwakazara kwezita rangu muzita raJesu.
• Ishe Mwari, ndinoparadza zvese zano nehurongwa hwemuvengi kuti ndigadzire dambudziko risingaperi muhupenyu hwangu. Ini ndinoparadza zvese zvehurongwa hwavo kuti zviise njodzi isingataurwe muhupenyu hwangu muzita raJesu. Bhaibheri rinoti Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, rubatsiro rwazvino munguva yezvinodikanwa, ndinonamata nerubatsiro rwenyu, ndinotsvaga utiziro hwenyu Iye Mutsvene waIsraeri, Ishe nyaradzai mweya wangu muzita raJesu.
• Ini ndinouya kuzopokana nekurwadziwa kwese uye nekushungurudzika muhupenyu hwangu, ndinozvikwevera nekuzvipfekera pamuti weKarivhari. Ndinotaura nehunyoro muzita raJesu, rugare rwese runotyisidzira matambudziko muhupenyu hwangu neropa raJesu. Ini ndinoparadza zvese zvavaiyita muzita raJesu.
• Ishe Mwari, ini ndinotsiva dambudziko rega rega, marwadzo ese, kutambudzika kwese muhupenyu hwangu, ndinozvitsiva nezvikomborero nemuzita raJesu. Ishe Mwari, nechikonzero chemunamato uyu, ndinonamata kuti mutumire munyaradzi wenyu, iwo Mweya Mutsvene muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Ishe Mwari, tinokumbira tsitsi dzenyu pamusoro pehupenyu hwevanhurume nevanhukadzi vanorwiswa zvakanyanya nemamiriro ezvinhu anoisa hupenyu, tinokumbira kuti muvanyaradze muzita raJesu. Wese murume nemukadzi vakarasikirwa nechimwe chinhu kana mumwe munhu akakosha kuhupenyu hwavo, tinokumbira kuti muve netsitsi pavari uye munyaradze mweya yavo muzita raJesu.
• Baba Ishe, ndinonamata kuti rwizi rwemufaro uye rwekufara ruyerere kubudikidza nehupenyu hwangu kubva zvino nekusingaperi muzita raJesu.
Previous nyayaMunamato Unopesana neMweya weKushushikana
inoteveraKunamatira Kune Simba Uye Nyaradzo
dhini Kurume 12, 2020 Pa 4: 24 am
Ndinokuda chose! Chikomborero chakadii chauinacho nezvaMwari!
Alejo A. Ebana Jr. Kubvumbi 7, 2020 At 3:22 pm
Iampo na sa Ginoo nga kami ni Sharlene Mae D.Ayson ug Alejo A
Ebana Jr.magkabalik na sa relasyun namu nga 9 ka tuig nga nkabungkag so Ian Calacat nga makunsinsiya sa iyang pakupanapaw kanamu kurugero na magbulag yafa magbalik mi ni Sharlene Mae D.Ayson ug Alejo.A.Ebana Jr.nga magpuyu nga magmalinawun uban Kang. jesuy Amen
Margaret Kubvumbi 12, 2020 At 11:00 am
Rumbidza Mwari, ini ndiri Margaret anobva kuKenya. Wanga uri chikomborero kwandiri muhupenyu hwangu hwekunamata. Yekunamatira gwara raive nehunyanzvi kuhupenyu hwezuva nezuva. Munhu waMwari rangarirai mhuri yangu iyo isina kumira zvakanaka mukwasha wangu ari kukonzerwa nezvibereko zvegomarara rechiropa uye amai vangu vanozoitwa MRI neChipiri yezvinetso zvemudumbu zvichibuda ropa zvakanyanya uye ane makore makumi manomwe nemana. Ndiri zvakare kutambura neBP kwenguva yakati. Tirangarire isu mumunamato wekuti Ishe vapindire. Mwari vakukomborere.
Ani Chikumi 22, 2021 Panguva ya2: 39 pm
Ini ndinonyora sengoloa sena kuonga Dr. Sago nekuda kwesarudzo dzemagetsi. Zita raAkai, akabva, Serbia Dr.Sago yekusaenda kunotsvaga kudzora munhu iyeye nehunhu hwemba yemukadzi akasiya mukadzi wemumwe munhu akanaka kune vamwe vakuru kune vamwe vasere. Kamora ku ona dzimba dzekutengesa kubva kunobva kuJenna kune vanobva kuUS nezve nekuona Dr. Dr. Sago ane hutachiona hwehupenyu hwehupenyu hwevakadzi pamwe chete, uye iye ndiye akagadzira nyeredzi dzaanogona kuona kuti angabatsirwa nekuda kwekuti anozogona kutamira kumba. khutlisa moratuoa oa ka le thabo. Ile ka ha mor makalaoa makala haholo khutlela haholo khutlela khutlela khutlela khutlela khutlela khutlela khutlela khutlela tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare tšoare thap thap thap Ke Ke Iye zvino haakwaniswe zvakanyanya nemapolelo mme uye haaoni kuti ndinotora zvigadziriso zvehunhu hwako, Dr. Sago. Iwe Mwari wekudhiridzira ho khutlisa kukanganiswa kwakakanganisa zvakashata, 'ikozvino mukadzi wemukadzi anodiwa. zvakafanana tsa hae tsa puisano ke; spellspecialistcaster937@gmail.com
5 Zvinhu Zvinogona Kutadzisa Mwari Kupindura Munamato